Akụkọ - Kedu usoro ọhụrụ nke ngwa nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma na 2021?
Amfụfụ mgbapụta karama
Rewghasa na mkpuchi kalama
Ihe na-akpali akpali
Ezigbo igwe na-agba mmiri
Achara ma ọ bụ ngaji osisi
Nyefee na kalama
Silk ebi akwụkwọ
Kedu usoro ọhụrụ nke ngwa nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma na 2021?
Agbanyeghị na ọrịa a emetụta ọrịa nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma, mmụba ha adịla ntakịrị karịa afọ ndị gara aga, ha enweghị ike ịkwụsị ndị na-azụ ụlọ na ndị mba ọzọ ịchọ ngwaahịa ọhụrụ, teknụzụ ọhụụ na igwupụta usoro ejiji.
Kedu ihe na-eduga na 2021?
Ọrụ, nchedo gburugburu ebe obibi na akụ na ụba
N'ime usoro ndị ahịa na-azụ ngwaahịa n'ezie, nkwakọ ngwaahịa bụ ihe dị mkpa iji chọpụta ma ndị na-azụ ahịa ha na-azụ ngwaahịa. Ya mere, ekwupụtala ụdị nkwakọ ngwaahịa nke ịchọ mma dịka ọnọdụ dị oke mkpa. Ihe eji eme ya na ihe omuma ya na aru oru di nkpa na nkwuputa ngwugwu ndi ahia.
Ebe ọ bụ na ihe iko nwere ike igosipụta ọkwa dị elu nke ngwaahịa a, ọtụtụ ụdị ndị dị elu na-ahọrọ iji ihe eji eme iko, mana ọghọm nke ihe ngwugwu iko ahụ pụtakwara. Yabụ, iji nweta nguzozi n'etiti ederede na akụnụba, ụlọ ọrụ PETG na-ejikwa ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ngwa.
PETG nwere nghọta dị ka iko ma dị nso na njupụta iko, nke nwere ike ime ka ngwaahịa ahụ dịkwuo elu n'ozuzu ya, ma n'otu oge ahụ ọ na-eguzogide ọgwụ karịa iko, ọ nwere ike ịkwado ngwa ngwa ugbu a na mkpa njem nke e - ọwa azụmahịa. Ndị ahịa ndị ọzọ so na ihe ngosi a kwukwara na PETG ihe nwere ike ịkwado nkwụsi ike nke ọdịnaya karịa acrylic (PMMA), yabụ ndị ahịa mba ụwa na-achọsi ya ike.
N'aka nke ọzọ, na mmụba na-arịwanye elu banyere nchebe gburugburu ebe obibi, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ọnụahịa nke ngwaahịa na-emetọ gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ ịchọ mma etinyekwala onwe ha na ya. Mmepe nke teknụzụ emeela ka ihe ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi pụọ n'echiche ma malite ịghọta ngwa ahịa. . A usoro nke PLA nchedo gburugburu ebe obibi (mere si emere maka mmeghari ohuru osisi, dị ka stachi akụrụngwa amịpụtara si ọka na akpu) apụtawo, nke na-n'ọtụtụ ebe na nri na ịchọ mma nkwakọ. Dị ka nkwupụta ya si kwuo, n'agbanyeghị na ọnụ ahịa nke ihe ndị na-emetọ gburugburu ebe obibi dị elu karịa nke ihe ndị nkịtị, ha ka bara nnukwu uru n'ihe metụtara uru akụ na ụba na uru gburugburu ebe obibi. Ya mere, enwere otutu ngwa na ugwu Europe na mpaghara ndi ozo.
Gwọ bụ ihe PLA dị oke ọnụ karịa ihe izugbe. Ebe ọ bụ na isi ihe eji eme isi bụ isi awọ na ọchịchịrị, njigide elu na ngosipụta agba nke ihe nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi dịkwa ala karịa ihe izugbe. Odi nkpa iji kwalite ihe nchedo gburugburu ebe obibi. Na mgbakwunye na njikwa ọnụ, mmezi usoro dịkwa ezigbo mkpa.
Nlebara anya nke ụlọ na mma ngwaahịa, nlebara anya na teknụzụ ngwaahịa
A na-achọ ọdịiche nke ụdị ịchọ mma ụlọ na nke mba ọzọ. "Akara mba dị iche iche na-emesi ike ịkpa nka na ọrụ aka, ebe ụdị ụlọ na-emesi uru na ịba uru" abụrụla nkwekọrịta nkịtị. Ndị ahịa ihe nkwakọ ngwaahịa webatara na nchịkọta akụkọ na ụdị mba ụwa ga-achọ ngwaahịa ị ga-anwale ọtụtụ ule, dị ka Cross Hatch Test (ya bụ, jiri mma Cross Hatch Test mara elu nke ngwaahịa iji nyochaa nrapado nke agba) , dobe ule, wdg, inyocha ihe nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa Adhesion, enyo, ihe, wdg na ntinye nke ngwugwu nkwakọ ngwaahịa, mana ndị ahịa ụlọ agaghị achọ nke ukwuu, nhazi mara mma na ọnụahịa kwesịrị ekwesị na-adịkarị mkpa.
Mgbasa ọwa, azụmahịa ngwugwu na-anabata ohere ọhụụ.
Ndị Covid-19 metụtara, ọtụtụ ihe ngwugwu ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ nlekọta anụ ahụ gbanwere ọwa na-adịghị n'ịntanetị n'ime nkwalite na arụmọrụ n'ịntanetị. Ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa kwalitere uto nke ire ahịa site na mgbasa ozi n'ịntanetị, nke mekwara ka ha nwekwuo ọrịre ahịa.
Tel:Lọ 4, Mba 1008, ọwụwa anyanwụ Jiefang Rd, District Fengxian, Shanghai City, China